Juventus oo horumar weyn ka sameysay wadahadalka ay kooxda Ajax kaga dooneyso Matthijs de Ligt – Gool FM
Juventus oo horumar weyn ka sameysay wadahadalka ay kooxda Ajax kaga dooneyso Matthijs de Ligt
(Italy) 02 Luulyo 2019. Fabrizio Romano oo ah saxafi ka howlgala shabakada caanka ah ee “Sky Sports” iyo wargeyska “The Guardian” ayaa shaaca ka qaaday, horumaradii ugu dambeeyay ay Juventus ka sameysay wadahadalada ay ku dooneyso heshiiska daafaca reer Holand iyo kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt.
Matthijs de Ligt ayaa ah mid ka mid ah magacyada ugu caansan ay saxaafada Yurub si xoogan kaga hadashay bilihii dhowaa ee lasoo dhaafay, iyadoo ay jirto in qaab ciyaareedkiisa uu soo jiitay kooxo badan oo Yurub ah, sida Barcelona, ​​Paris St Germain iyo Juventus.
Balse kooxda Juventus ayey wararku xaqiijiyeen in heshiis afka ah ay la gaartay Matthijs de Ligt, si uu u saxiixo qandaraas ilaa iyo 2024-ka, waxaana mushaar ahaan loo siin doonaa sanadkii qiimo lacageed dhan 12 milyan euro.
Laakiin sheeko waxay ka taagan in labada kooxood ee Juventus iyo Ajax ay ku muransan yihiin qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa naadiga reer Holand ee gaarsiisan 75 milyan euro.
Yeelkadeeda, saxafigan caanka ah ee ka faalooda arrimaha Isboortiga ee Fabrizio Romano ayaa wuxuu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah baraha bulshada ee Twitter-ka, in kooxda Juventus ay si xoogan kaga shaqeeneyso in si dhaqsi ah ay kusoo afjarto wadahadalada ay kula jiraan maamulka Ajax.
Labada dhinac ayaana ku dhow inay ka wada heshiiyaan arrinta ku saabsan saxiixa daafaca birta ah ee Matthijs de Ligt, maadaama wadahadalada ay gaareen heer sarre, iyadoo agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus ee Fabio Paratici uu diyaar u yahay inuu gudbiyo dalabkii ugu dambeeyay ay ku doonayaan saxiixa daafacan reer Holand.
Kulamada caawa la ciyaarayo Koobka Qarammada Afrika, Copa America iyo Koobka Adduunka Dumarka ee 2019 iyo saacadaha ay soo galayaan
Neymar aabihiis oo la kulmaya kooxda Barcelona & xilliga la filayo inuu qabsoomo fadhigan